China osisi ifuru ohia ifuru ụlọ ụlọ Manufacturer na Supplier | Ruiyi
Ma ị bụ onye nwere ahụmahụ na-elekọta ubi ma ọ bụ na-eto eto na-eto eto, ihe ndina akwa a dị mma maka gị.
Nchedo na nri osisi: Mbelata nke griinụ nwere ike iwelie mkpụrụ osisi site na inye gburugburu ebe obibi na-ekpo ọkụ ma na-edozi ahụ. Ọ na - egbochi mmetụta nke oke ihu igwe, na - enye gị ohere ịkọ ahịhịa ndị anaghị eto nke ọma na mpaghara gị. Nwere ike ịhọrọ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'afọ niile na oge oyi.
Blanking, zọ, ekwe, ekwe, ịgbado ọkụ, polishing, sandblasting, spraying, nnyocha, nzukọ, nkwakọ, okokụre ngwaahịa
Nchedo osisi na nri: Greenhouse iju nwere ike dịkwuo osisi mkpụrụ site n'inye a na-ekpo ọkụ ma na-edozi gburugburu ebe obibi. Ọ na - egbochi mmetụta nke oke ihu igwe, na - enye gị ohere ịkọ ahịhịa ndị anaghị eto nke ọma na mpaghara gị. Nwere ike ịhọrọ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'afọ niile na oge oyi.
Kwesịrị ekwesị maka onye ọ bụla ji obi uto na-elekọta ogige:Ma ị bụ onye nwere ahụmahụ na-elekọta ubi ma ọ bụ na-eto eto na-eto eto, ihe ndina akwa a dị mma maka gị. Igbe ite okooko osisi na-eme ka ịgha ahịhịa, akwụkwọ nri na osisi dị mfe na enweghị nchekasị. Jiri griin haus iji kporie obere mmezi, ikpo ọkụ na mmiri dị n'ime, na ụmụ ahụhụ na ụmụ anụmanụ pụọ.
Mfe ịgbakọta:elu-edu, nchara-àmà, ntụ ntụ-ntekwasa, kpaliri ígwè ogige bed na plastic njikọta maka mfe nzukọ. Enwere ike tinye ngwa ngwa griin haus dị elu na-adịgide adịgide na ígwè. Na mgbakwunye, enwere akụkụ nchekwa na elu na ala. Enwere ike ịchekwa ihe mkpuchi griin haus na akpa nchekwa ejiri mgbe anaghị eji ya.
Chekwaa ego: Ọnụahịa na-arị elu nke ahịhịa na ngwaahịa ugbo na-eme ka iri nri dị mma bụrụ nhọrọ dị oke ọnụ. Ma nke a abụchaghị eziokwu. Too nri gị abụghị naanị ihe dị mma maka ahụ na uche gị, kamakwa maka obere akpa gị. Kwa afọ ị nwere ike ịzụta mkpụrụ osisi kachasị amasị gị, akwụkwọ nri na ahịhịa, yana obere obere ihe ọkụkụ!
Comprehensive Nchedo ：Ezubere griin haus iji chebe osisi gị na ịgha mkpụrụ megide ọnọdụ ihu igwe siri ike dịka mmiri ozuzo, ifufe, na snow. Ọ nwere ike ịmepụta ebe kachasị mma maka osisi gị ka ọ na-eto eto ahụike ma na-enye aka ịgbatị oge ị na-eto eto!
Eco-Enyi na Enyi Pee ihe: Anyị na-eji Polyethylene (PE) a na-ahụkarị na gburugburu ebe obibi-enyi na enyi. .
Nhazi siri ike:Greenlọ griin haus na-agbakwunye ọkpọkọ ígwè dị elu dị ka nkwado iji mee ka nkwụsi ike na osisi ndo pụọ na ifufe. Ọzọkwa, ụgbụ nkwado na-akwụsi ike siri ike iji jide trays mkpụrụ ndị ọzọ, ahịhịa na ihe ọkụkụ ndị ọzọ maka uto osisi.
.Dị Ubi Greenhouses
Aha Akara QLYD
Materialba Ihe Ahịa
Ụba Finrụcha Ntụ ntụ ntekwasa
Njirimara Easilt Ezukọtara, Eco Friendlt, Rodent Proof, Porta
Ihe onwunwe Poli kpara akwa
Nọmba nlereanya OEM
Typedị .dị Nchara
Nrụgide Ejiri Nature
Aha Ogige Portable 3 * 6 * 2 2mTunnel Polt Conservatory
Nha 300cm * 600cm * 220cm
Ntinye Osisi na akwukwo osisi n’eto eto
Usoro Omenala Nabata
Nyefee Oge 30ụbọchị
Na izipu ihe ozi-e ka sales@ruiyitools.com
Oge nke mmalite Shandong, China
Nke gara aga: Okporo osimiri ụgbọ ala
Osote: Vehiclegbọ njem ntụrụndụ n'èzí
Concrete igwekota Truck, China Pu ụfụfụ Wheel, PU Wheel, China PU wiil, Caster ụkwụ anọ, China Concrete igwekota,